Kanadà: Tanora Indizena Mizara ny Soatoavin-dry Zareo anaty Fifaninanana Lahatsary · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Avrily 2011 7:00 GMT
Vakio amin'ny teny Español, 繁體中文, 简体中文, Italiano, polski, English
Iray amin'ireo tanora no hahazo fahafahana handeha lavitra sy hampiseho ny rakitsary fohy novokarin-dry zareo ao amin'ny imagineNATIVE festival. Ny mpandresy dia izay ho voafidy amin'ny fifidianana anaty vohikala ao anaty aterineto alohan'ny 1 May.
Keelan Keeshig avy amin'ny Cape Croker dia tanora zokiny avy amin'ny Parry Sound High School ary ao anatin'ny lahatsariny izy dia mizara ny fomba iatrehany ireo fanambanimbaniana tsy mitsaha-mitombo: ho azy, izany dia noho ny volo lavany, marika iray mampiavaka ny kolotsaina nentin-drazany izay tsy hainy ny hanazava azy amin'ireo namany mitapa-bolo.
Laura Gagnon dia Ojibway ary toa feno fampanantenana ny hananany ho avy mamiratra, saingy safidy diso ny nidirany amin'ny fiankinan-doha amin'ny zava-mahadomelina sy ny fisotroana. Tamin'ny alalan'ny fiverenana ifotony tamin'ny fàka ara-panahy sy ara-kolotsainy no nahafahany nahita ny mazava ary efa niverina an-tsekoly ambaratonga faharoa izy ankehitriny, ary manantena ho tonga hatrany amin'ny kolejy sy ho lasa mpanoro hevitra momba ny fiankinan-doha mba ho fanampiana ny hafa.
Sequin D. Williams ao amin'ny Fort Albany First Nation dia manazava ny fombany mamerimberina fahazarana iray rehefa mandeha mihaza gisa miaraka amin'ny rainy izy: ny rainy ihany koa no nampianatra an-drainy ny fihazàna, noho izany ho an'i Sequin, ny fihazàna dia fomba fifamatorany amin'ny razambeny sy ny fomban-drazana indizena.
Azonao atao ny mahita ireo lahatsary 7 hafa ao amin'ny vohikalan'ny imagineNATION , sady mifidy izay iray mahafinaritra anao: ny mpandresy dia ho tsara vintana hampiseho ny lahatsary fohy novokariny amin'ireo mpanakanto sy mpilalao hafa avy eo amin'ny vondrom-piarahamonin'ny haikanto Indizena ao amin'ny Toronto Film And Media Arts festival.